R/wasaare Cumar “Waan ku rajo weynahay in uu mira dhalo dhismaha maamul u sameynta Hiiraan iyo SH/Dhexe” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
30th April 2016 MAREEG Af Soomaali 0
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke ayaa rajo ka muujiyay in Xukuumadda ay ku guuleysaneyso dhismaha Maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe.
Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya oo marti ku ahaa barnaamijka kulanka todobaadka ee ka baxa Telefishinka Qaranka iyo Radio Muqdisho ayaa sheegay in uu iminka meel fiican marayo dhismaha maamul u sameynta Gobollada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe.
“Shirka wuu socdaa, waxaana laga taxadarayaa in aan si qalad ah wax ku dhismin, waqti ayay qaadatay, waana siinay waqtigaas, runtii mid aan laga soo marin qilaaf ma jirin, waxaan rajeynaynaa in shirka uu miro dhalo oo lagu guuleysto” ayuu yiri Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in Xukuumadda Soomaaliya ay fursado siineyso dhallinyarada, si ay door ugu yeeshaan habka uu u dhacayo doorashooyinka, oo ay qeyb ka noqdaan guddiyada dhanka doorashooyinka qaabilsan,
Ciidamada Xooga Dalka oo Shabaab kala watreegay Deegaano hor leh eeSh/dhexe.